भग्न कोइलावासको ‘गुल्जार सपना’
लिलाधर वली दाङ - शनिबार, कात्तिक १, २०७७
भव्य भवनहरू तर, जीर्ण भइसकेका। पुराना ‘स्टाइल’मा बनेका भग्नावशेष।
इतिहासको एउटा भग्न सहर, अर्थात् कोइलाबास।
आधा भत्किएको कोइलावासको तत्कालिन प्रहरी चौकी । पक्की कालोपत्रे सडकको छेउमै भग्नावशेष अवस्थामा रहेको तत्कालि कोइलावास भन्सार कार्यालय।
यो काइलावास सहरको ‘भग्नावशेष’हो।
कुनै बेला गुल्जार हुने यो सहरको विद्रूप रुपमा इतिहासका अनेक कथा जोडिएका छन्।
कुनै बेला देशकै ठूलोमध्येको भन्सार हो यो, धेरै पैसा संकलन गर्ने।
भन्सार राजश्व उठाउने सवालमै नेपालको सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार थियो।
त्यसपछिको ठूलो नाकाका रुपमा रहेको कोइलाबास नाका।
दुई दर्जनजति कर्मचारीलाई भ्याइ–नभ्याइ हुन्थ्यो, कोइलाबास भन्सारमा।
तर, अहिले तीनजना मात्रै भन्सार कर्मचारी छन्।
अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सम्हालको त्यो भन्सार नाका फेरि व्यूँझिएला?
होला त त्यतिबेलाको कोइलाबास?
यही दोधारमा छन्, कोइलाबासबासीहरु।
यद्यपि हुलाकी पक्की सडकमार्गले छोएपछि भने कोइलाबासको सपना फेरि बौरिएको छ।
बुट्यान र झारहरुले ढाकेर भग्नावशेष भइसकेको कोइलावास नाकामा पक्की सडक पुगेपछि चलह–पहल केही बढेको छ।
र, फेरि गुल्जार हुने सपनामा जुर्रमुराउन थालेको छ।
दिउँसो एक्लै हिँड्नै डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको कोइलावासमा मानिसहरुको चहल–पहल बढेसँगै कोइलावासमा पक्की घरहरुसमेत निर्माण हुन थालेका छन्।
जसले गर्दा नेपाल–भारत सीमा नाकाको मुख्य नाकाका रुपमा रहेको कोइलावास क्षेत्रमा विस्तारै चहल–पहल बढ्न थालेको छ।
राप्ती क्षेत्रकै मुख्यद्वारका रुपमा रहेको कोइलावास नाका पुग्नका लागि लमही-कोइलावास सडकअन्तर्गत रहेको ३४ किलोमिटर सडक फराकिलोसँगै कालोपत्रे भएपछि कोइलावासमा जान आउन सहज भएको बनेको छ।
करिब ३५-४० बर्ष पहिले व्यावसायिक दृष्टिले नेपालकै प्रमुख नाकाहरुमध्येका रुपमा गनिन्थ्यो।
त्यो समयमा कोइलावास नाकामा राम्रै राजश्वसमेत संकलन हुने गथ्र्याे।
पश्चिम नेपालको एउटा प्रमुख नाकाको रुपमा यो ‘भन्सार–बजार’ त्यो बेला निकै चम्किएको थियो।
तर, यहाँ पुग्ने पक्की बाटो थिएन। भारतबाट त गाडीमा सामान आउँथ्यो तर, त्यहाँबाट घोडा, खच्चड वा भरियालाई बोकाएरै सामान पुराउनुपर्ने बाध्यता थियो।
मध्यसुदूरका सबैजसो पहाडी जिल्लाका लागि सामान यहीँबाटै जान्थ्यो।
तर, विस्तारै पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्यो। अनि कोइलावासलाई कृष्णनगर भन्सारले विस्थापित गरिदियो।
सिधा राजमार्गसँगै कृष्णनगर नाकामा आउजाउ सजिलो भयो। गोरेटोबाटो पुग्नुपर्ने कोइलाबास ओझेलिँदै गयो।
त्यो सँगै नेपालगन्ज भन्सारले पनि आफूलाई विस्तार गर्दै गयो। कोइवास पुग्ने बाटोमा झाडी झन् बाक्लिन थाले।
कोइलावासमा के थिएन? सब थियो। व्यापार थियो। सहर थियो। कैयौँ व्यापारीको व्यापार चलेको थियो। वरिपरिका गाउँलाई पनि राम्रै थियो।
विस्तारै कोइलावास छायाँमा पर्दै गयो र, मानिसहरुले धमाधम कोइलावास छोड्न थाले।
कोही राजमार्गमा गुल्जार भइसकेको लमही बजार सरे। कोही भालुवाङतिर हानिए। कोही सदरमुकाम घोराहीसम्म पुगे। कोही त्यसलाई पनि छिचोलेर, तुलसीपुर अनि सल्यानतिर हानिए।
कोइलाबासमा शून्यता छाउन थाल्यो। तर, पनि केही मानिसलाई ‘आशा’ थियो, एक दिन फेरि कोइलाबासको दिन पक्कै फिर्नेछ।
र, त्यहीबीचमा चलेको तत्कालिन माओवादीको युद्धले कोइलावासलाई अझैं थिलोथिलो पारिदियो।
त्यहाँ भएको प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि कोइलावासलाई पनि माओवादीले एउटा ‘आधार इलाका’ नै बनायो।
अझ भारत आउजाउका गर्न त, उसका लागि कोइलावास निकै सुरक्षित मानियो।
यसरी कोइलावास भित्रभित्र सुक्दै गयो। भारतीय तस्करले कोइलावासको आँगनमै बग्ने खोलाको बालुवा झिकेर सुकाएसरी।
र, मुख्य राजमार्ग जोड्नो कालोपत्रे सडकसँगै यो आशा अझ उजेलिन थालेको छ।
लल्लु कुरेसीले पनि यही आशामा कोइलावास छोडेनन्। अहिले पनि उनको चिया पसल छ।
‘आशा त सबै मरिसकेका थिए। तर, फेरि जाग्न थालेको छ’ उनले भने ‘एक टाइम त कोइलावास सुकिसकेको थियो।’
व्यापार–व्यवसाय सुक्दै गयो। सरकारी कार्यालयहरू पनि विस्तारै जान थाले।
मानिसले घरबास छोडेरै हिँड्न थाले। मानिसहरूले कोइलावास छोड्दै गर्दाको त्यो भयानक दृश्य अझै ताजा लाग्छ उनलाई।
‘यहाँ बस्दै आएका मानिसहरुले घर छोड्दै जान थाले, जान नसक्नेहरु मात्र यहाँ बस्ने अवस्था आएको थियो’, ६५ बर्षीय कुरेसीले भने ‘त्यो समय यो ठाउँमा दिउँसो हिँड्डुल गर्न पनि डराउने जस्तो देखिन्थ्यो, तर अहिले फेरि विस्तारै कोइलावास फेरिन थालेको छ।’
अब कोइलाबास पुग्ने सडक पिच भइसकेको छ। विद्युत पुगिसकेको छ।
मानिसको चहलपहल बढ्न थालेको छ।
कोइलाबास हेर्नै पुग्नेहरू पनि बढ्दैछन्।
र, कुरेसीहरूको जीवनमा फेरि आशाका किरण दौडिन थालेका छन्।
कोइलाबासमा रहेको रामजानकी मन्दिरका साथै पहाडी क्षेत्रमा हेर्नका लागि मानिस आउने गरेको उनले बताए।
जनकपुरपछिको यो अर्काे ठूलो रामजानकी मन्दिर हो।
उनको जस्तै अनुभव छ हकिम सिद्धिकीको पनि।
उनी पछिल्लो समय कोइलाबाससँगै जोडिएका विकाससँगै फेरि पुरानो कोइलावासको आशमा छन् उनी।
‘यै सकड पहिला नै भइदिएको भए, अहिले कोइलाबासको हालत यस्तो हुने थिएन’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेहरु आउन जान थालेपछि त, बल्ला कोइलाबासजस्तो भएको छ।’
नेपालको पुरानो नाकाका रुपमा रहेको कोइलावास नाकासँगै यहाँ प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्वरप हेर्नेहरु पनि बाक्लिन थालेका छन्।
‘लकडाउनअघि नेपालतिरबाट भन्दा भारतीयबाट धेरै मानिस कोइलावास घुम्न आउने गरेका थिए’, उनले भने– ‘तर लकडाउनका कारण सिमानाका बन्द भएपछि भारतबाट मानिस कम आउन थालेका छन्।’
कोइलावासमा चहल–पहलसँगै लामो समयदेखि सुनसानजस्तै भएको नाका फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने आशामा रहेका उनी बताउँछन्।
‘सडक निर्माणसँगै यहाँ चहल–पहल हुन थालेपछि कोइलावासमा सम्पत्ति भएका मानिसहरु आएर आफू बसेको ठाउँ हेर्न आउने गरेका छन्’, उनले भने– ‘कोइलावासमा चहल–पहल बढ्न थालेपछि यहाँबाट छोडेर गएका मानिसहरू आउनसक्छन्।’
र, फेरि कोइलाबास उज्यालिने छ।